Inona no toerana tsara indrindra hividianana rindranasa ho an'ny tranokalako vaovao?
Raha mbola manontany tena ianao hoe aiza no toerana tsara indrindra hividianana backlinks ho an'ny tranonkalanao, dia amin'ny toerana farany ianao. Alohan'ny hanohizako ireo loharanom-pitaovana ampiasaina sy ampiasaina ampiasaina ho an'ity, dia avelao aho hampiseho aminao ny soso-kevitra momba ny bala ilaina mba hisorohana ny tsy fahombiazan'ny voalohany. Araka ny hita amin'ny maha-tsikera azy, ity dia tokony hatao aloha alohan'ny hivoahana sy hitadiavana ny tenanao amin'ny toerana tsara indrindra hividianana rindran-kaonty:
Ny antontan'isa manan-danja indrindra ao amin'ny tranonkala, azafady fa ny zava-drehetra momba ny fitombenan-draharaha fototra dia manomboka - manomboka amin'ny DA (manampahefana eo amin'ny sehatra), PA (fahefana), mankany TF (fitokisana), ary koa CF (citation flow);
tsy miova velively amin'ny fandoavana ny tena vidiny, satria ny anjaran'ny liona amin'ny tolotra mahafinaritra toy ny "fifanarahana tsara indrindra" na "fihenam-bidy an-tsokosoko" dia tsy ho azo atao ny mendrika ny mividy rindranasa ho an'ny tranonkalanao raha tsy mahazo scammed;
aza misalasala mampiasa vola vetivety amin'ny fanamarinana ny fanamarihana avy amin'ny mpanjifa hafa, ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny hanamarina ny zava-drehetra araka izay azonao atao, tsy havelanao hivoaka haingana fotsiny mba hanaovana fifanarahana haingana - izay dia afaka mitondra ny fandrosoan'ny tranokalan-tseraseranao amin'ny famoahana ny faharavàna amin'ny alàlan'ny bakalavoana marevaka na spammy.
Noho izany, iza no toerana tsara indrindra hividianana rindran-damina? Nandritra ny taona vitsy lasa izay dia maro tamin'izy ireo no niezaka nanao fifanarahana tamin'ireo olona azo itokisana ihany - luxury yachts rentals. Ireto ambany ireto ny loharanon-kevitra telo an-tserasera hitako indrindra indrindra amin'ny fiatrehana:
Links Management - toerana tsara indrindra hividianana rindran-damina tsy henoina ny kalitaony, ary na dia bola kely. Eto ianao dia afaka manamboatra rindran-dalana maharitra avy amin'ny tranonkala samihafa miaraka amin'ny isa PR amin'ny 1 ka hatramin'ny 8. Mazava ho azy, milaza izy ireo fa ny zava-drehetra dia napetraka amin'ny tanana, fa raha mbola misalasala ianao - tsinontsinona ny manamarina ny tranga misy azy sy ny tantara mahomby.
Post Links - ity dia manana karazana soso-kevitra isan-karazany azo ampiasaina miaraka amin'ny tranonkala hafa sy ny tranonkala miaraka amin'ny latsaky ny sokajy. Ho ampanantenaina ianao fa ny lohan-drakibolana original sy marina avy amin'ny tranonkala tena izy miaraka amin'ny votoatin'ny kalitao ary tsy misy spam. Mazava ho azy fa toa mafy be ny vidiny. Na izany na tsy izany, azoko atao ny mahita ny rohy Post toy ny toerana mety indrindra hividianana rindry. Ny fifampiraharahana amin'izy ireo dia manana ny toetrany ambony indrindra aho ary mety hiteraka loza mety hitranga amin'ny rohy karamaiko.
Fiverr - dia anisan'ireo tranonkala malaza amin'ny aterineto, webmasters, ary tompona orinasa maro an-tserasera. Ity tsena goavambe ity dia afaka manolotra anao karazana backlinks isan-karazany amin'ny dika mitovy isan-karazany amin'ny ankapobeny manomboka amin'ny bucks dimy. Saingy tonga ny fampitandremana - ny zavatra dia maro amin'ireo mpivarotra no mampiasa tsy fitaovana ara-dalàna tanteraka hanamboarana rindran-damina, indraindray na amin'ny fomba samirery aza. Inona no tokony hatao mba hisorohana ny sazy Google ho an'ny backlinks naloa? Aza mandray fanapahan-kevitra farany hividianana afa-tsy tolotra ambony manana ny mari-pahaizana ambony sy ny isa mavesa-danja - tsy ampy izany. Tadiavo foana ny karoka telo rehefa manao fifanarahana amin'ny Fiverr. Farany, avelao aho hampitandrina anao indray mandeha indray - raha tsy mahatsiaro ho toy ny projet ianao ao amin'ny SEO, na ilay mpikarakara webmaster - dia tsy ho fantatrao mihitsy ny backlinks azo antoka ho an'ny tranonkalanao. Azonao atao ny manandrana manandrana ireo loharanom-pampandrosoana izay efa noteneniko talohan'izay.